उपप्रधानमन्त्री नियोजन ? - परिहास - नेपाल
उपप्रधानमन्त्री नियोजन ?
पहिले–पहिले नयाँ सरकार गठनका बेला ‘पार्टीको नेतृत्व गरेर जाने’ होडबाजी चल्थ्यो । त्यस्तो होडबाजी चलेपछि केपी ओलीले पनि के गरुन् ? पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छँदा ‘सरकार चलाउन’ आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री बनाइदिए । सरकार चल्यो, जम्मा दश महिना । यसपटक पााच वर्ष चलाउनु छ उनलाई । तर, एक थान उपप्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार भएनन् । ठूलठूला नेता मन्त्री भएका छन् । तर, उपप्रधानमन्त्री पाएका छैनन् । केही हप्ताका भूपू उपप्रधानमन्त्रीसमेत चुपचाप ‘मन्त्री मात्रै’ खाइरहेका छन् । वरिष्ठ नेताहरुले नै उपप्रधानमन्त्री नताकेपछि कनिष्ठहरुले कसरी दाबी गरुन् ? उपप्रधानमन्त्री नै नियोजन गर्ने आइडिया आफू मात्रै चल्ने, अरुलाई नचल्ने बनाउने हो कि आफ्नो पाँच वर्षे गाथगादी कसैले ताक्न नसकून् भन्ने मनोकांक्षा हो ओली कमरेड ? जनता जान्न चाहन्छन् ।